မဟာ Aungmye Bonzan ကျောင်းတိုက် | မြန်မာသွားရောက်ကြည့်ရှု
နေအိမ်→မန္တလေး→အင်း→မဟာ Aungmye Bonzan ကျောင်းတိုက်
Thapyatan ခံတပ် →
မဟာ Aungmye Bonzan ကျောင်းတိုက်
မဟာ Aungmye Bonzan ကျောင်းတိုက် (ထို့အပြင်မိုင်းနု Oak ကျောင်းဟုခေါ်တွင်) အရှေ့မြောက်အင်းထဲမှာ (အင်း) ပတ်ပတ်လည် built အကြီးအကျယ်ရှေးဟောင်းဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဖြစ်ပါသည် 1820.
ထိုဒေသတွင်အခြားအဆောက်အဦးများအများကြီးလိုပဲကပျက်စီးခဲ့သည် 1838 ငလျင်. ဒါဟာနောက်ပိုင်းတွင်အပြည့်အဝအတွက်ပကတိဖြစ်လေ၏ 1873.
အဓိကဝင်ပေါက်၏ညာဘက်ဖို့ဘုန်းကြီးကျောင်းခိုင်ခိုင်လုံလုံအနားမှာလမျးခရီးကိုစောင့်ရှောက်နှစ်ခုကြီးမားသော chinthe သည်ခြင်္သေ့ရုပ်တုများမှာ.
နေ့စဉ်အသုံးပြုမရှိတော့နေတုန်းကဒီရှေးဟောင်းဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း 19 ရာစုမြန်မာဗိသုကာကျန်ရစ်သူ၏အကောင်းဆုံးဥပမာတစ်ခုဖြစ်တယ်. လက်ရှိအလုပ်လုပ်ကိုင်ဘုန်းကြီးကျောင်းကဒီကြီးမားတဲ့ရှေးဟောင်းအဆောက်အဦး၏နောက်ဘက်ညာဘက်ယခု.
အဆိုပါဘုန်းကြီးကျောင်းရဲ့အတွင်းစိတ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှတဆင့်တစ်ဦးကလှည့်လည်အများကြီး cliostered လမ်းကြောင်းများနှင့်အနည်းငယ်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ထုတ်ဖော်ပြသ. သင်တို့သည်လည်းမြေပြင်အဆင့်မှာအဖွင့်မှတဆင့်ဘုန်းကြီးကျောင်းအောက်မှာသွားနိုင်ပါတယ်.
တိုက်ရိုက်မဟာ Aungmye Bonzan ကျောင်းတိုက်နောက်ကွယ်မှသင်သည်အများအပြားအဖြူစေတီပုထိုးသေးငယ်တဲ့ရှုပ်ထွေးတှေ့လိမျ့မညျ, ဒီ Htilaing ရှင်စေတီတော်ဖြစ်ပါသည်. ဒီစေတီတော်များ၏ကာလတုန်းကမရခဲ့ဘူးအဖြူရောင်ပု ocher ရောင်စုံဘုန်းကြီးကျောင်းမှသိသိသာသာစာချုပ်၌တည်ရှိ၏.
သငျသညျနေရာချထားအထောက်အကူပြုရန် Google မြေပုံရည်ညွှန်း မဟာ Aungmye Bonzan ကျောင်းတိုက် အင်းထဲမှာ – Google ကမြေပုံ
အကယ်. အင်းဖို့သင့်ခရီးစဉ် (အင်း) သာသငျသညျအနညျးငယျရှေးဆိုဒ်များမဟာ Aungmye Bonzan ကျောင်းတိုက်သူတို့ထဲကတဦးတည်းကြောင်းသေချာအောင်ကြည့်ရှုဖို့လုံလောက်တဲ့အချိန်ခွင့်ပြု. တစ်ဦးကတွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်သည်.
Posted in, အင်း	permalink
le Htat ကြီး Payan Beverage ထုတ်ယူခြင်း
ရတနာ Hsemee စေတီတော် Complex